ဘူမိဗေဒ Geology ဆိုသည်မှာ
သကောင့်သားကျွန်တော်သည်ပထမနှစ်တွင်ဆယ်တန်းအောင်အမှတ်များထား၍အောက်ခြေလွတ်၏။သို့ဖြစ်၍ပထမနှစ်အမှတ်လျှော့လေ ရာဒုတိယနှစ်အထူးကြိုးစားရလေ၏။အမှတ်များသော် လည်းပထမနှစ်၌ယူရသောဘာသာရပ် ၅ ခုအရ ပျမ်းမျှအမှတ်ကို carry လုပ်မပေး နိုင်ဘဲဆယ်တန်း ပ-နှစ်/ဒု-နှစ် အမှတ်များအရ ၇၇-၇၈ သာရလေတော့သည်။
သိကြသည့်အတိုင်းဘူမိအရှေ့မှာလျှောက်ခဲ့သောဘာသာရပ်များပြုတ်၍ဘူမိဗေဒကျောင်း သားဖြစ်လာရလေ၏။ ဘူမိဗေဒကျောင်းသားဖြစ် တော့လည်းမိဘပေးစားသည့်ဟိုဒင်းလိုအတူနေရင်းတဖြည်းဖြည်းချစ်လာမိပါ တော့သည်။
အချို့ပညာနယ်ပယ်မှမနှံ့စပ် သောသူအချို့မှာမူ….ဟင်…..ဘူမိဗေဒနှင့်ဘဲဘွဲ့ရခဲ့ တာလား……ဟုနှိမ်ချင်သလိုလိုပြောကြသည်။
ကိုသော်၎င်း၊“ဘဲ” ကိုသော်၎င်း ဂရုမစိုက်တော့ပါ။
ကျောင်းမှာသင်ကြားတာကတော့Geology is may be defined as the process of …… ဘာညာကိစ္စပေါ့ ဗျာ….တစ်ကယ်တမ်းသင်ကြားရင်တော့ တတိယနှစ်၊စတုတ္ထနှစ် ၂ နှစ်တည်းနှင့်ကျောင်းပြီးတာကိုမလိုချင်တော့ဘူးအရင်လိုလေးနှစ်သင်ရတဲ့ ခေတ်ကိုပြန်တမ်းတမိပြီ……ဟုတ်တယ်လေ
၁၉၈၁ ခုနှစ်ဧပြီလဆန်းမှာကျွန်တော်တို့(၁၉၈၁ ခုနှစ်ဆင်း)မြောက်ရွှေပုထိုးကွင်းဆင်းအုပ်စုလေး individual field ထွက်လာရလေ၏။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာကိုကိုအေး(ကွယ်လွန်)သန်းစော ဦး၊သန်းထွန်းဦး၊ကျွန်တော်နှင့် ကိုမြအိ …
အဲဒီမှာ ၀ါးပိုးရေ ဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်တော့အရင်ဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဝင်တယ်။
အချိန်ကလည်းဆွမ်းဘုန်းပြီးစအချိန်…ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဟင်းအပြင်ဘုန်းကြီးကစွန့်မဲ့ဟင်းပါ ဟဲ ရလို့ကတော့ထမင်းမြိန်ပြီတွက်ထား တာ……ဘုန်းကြီးက အခါးရည်(ရေနွေးကြမ်း)
ဘဲလာချပေးသည်။အဲဒါနှင့်ကျနော်လည်းလွယ်ထားတဲ့ရေဘူးထဲကအသင့်ဖျော်လာတဲ့ Queenလိမ္မော်ရည်ကိုငှဲ့ပြီးဘုန်းကြီးသုံးပါးကိုကပ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှကျက်သရေခန်းထဲမှ ဇီးသီး၊ထန်းလျှက်၊မက်မန်းသီးတွေထွက်လာပါတော့သည်ခင်ဗျား…….
ဒို့ဘာသာ ဟာတစ်ခြားဘာသာရပ်လိုလက်တွေ့ practical လုပ်ရုံနှင့်မရဘူး….
Practical အပြင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကွင်းဆင်းပြီး research လုပ်မှပြည့်စုံတယ်ကွ…တဲ့…
ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းကိုသ.သူပြောတာလဲမှန်ပါတယ်ဗျ…..ပေါ်ထွက်ပိုင်း Out crop အနေအထားအရဒီလိုရှိတယ်။
အထက်မှာကျွန်တော်ဖေါ်ပြထားသလို Geology ရဲ့ Definition ကလည်း May be ဆိုထားတာကိုး……
ကျောက်လွာစဉ်အနေအထားပေါ်တွေ့ရှိမှု၊ယခင်ကလေ့လာ တွေ့ရှိချက်၊ဓါတ်ခွဲခန်း Sample တွေ့နှင့် cutting တွေ့ရဲ့ဖေါ်ပြချက်အရ ယခင်ထက်ပို၍တိကျသော X- section ကိုဆွဲပြနိုင်ပါသည်။
မမေးပါနှင့် ပထမနှစ်က ဇီဝဗေဒ၊ဒုတိယနှစ်ကမွေးမြူရေး၊တတိယနှစ်နှင့်စတုတ္တနှစ်မှာ ဘူမိဗေဒ၊အခုအပြင်မှာလက္ဘက်ရည်ဖျော်နေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အဲဒီတုန်းကမိန်းခလေးတွေဘူမိဗေဒ၀င်ခွင့်ပေးတဲ့နှစ်မို့လို့မိန်းခလေးအင်အားနည်းနည်းနှင့်ကျားအင်အားများစွာ RC ထဲသွား ကြည့်ကြတာပေါ့
ဥပဒေဘက်က …… ၄တန်း၎တန်းသပ်သပ် ၅တန်း၅တန်း သပ်သပ်……ဆိုပြီးအဆင့်ခွဲတဲ့စကားနှင့်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။
ဆိုလိုတာကကျနော်တို့ဘူမိဗေဒက ၄နှစ်နှင့်ကျောင်းပြီး ပြီ…
သူတို့ဥပဒေက ၅နှစ်တက်ရတော့မတူဘူး လို့ပြောတာ…..
ဥပဒေက ၅ နှစ်တက်ရပေမယ့်စာပေးစာယူ(အဲဒီခေတ်အသုံးအနှုန်းပါ အခုအဝေးသင်)ယူလဲရတယ် ဆို……ဟေ့..အရည်အချင်း အရည်အချင်းသပ်သပ်…
ဒါပါပဲ…Geology ဆိုတာ တွေး၍ဖြစ်နိုင်ပါစေ…….